1 BitShares (BTS) to Zimbabwean Dollars (ZWL) today
1 BTS to ZWL
1 BTS = 11.53 ZWL at the rate on 2021-12-06 .
The cost of 1 BitShares in Zimbabwean Dollars today is 11.53 ZWL according to the “Open Exchange Rates”, compared to yesterday, the exchange rate decreased by -1.58% (by -0.18 ZWL). The exchange rate of the BitShares in relation to the Zimbabwean Dollar on the chart, the table of the dynamics of the cost as a percentage for the day, week, month and year.
2 BTS to ZWL
3 BTS to ZWL
11.53 ZWL 23.06 ZWL 34.58 ZWL
Graph of change in 1 BitShares to Zimbabwean Dollars rate
Dynamics of the cost changes of 1 BitShares (BTS) in Dollars (ZWL)
Compare the cost of 1 BitShares in Zimbabwean Dollars in the past with the current price at the moment.
November 30, 2021 Tuesday 1 BTS = 15.50 ZWL -0.05 ZWL -0.29%
December 1, 2021 Wednesday 1 BTS = 15.45 ZWL -0.06 ZWL -0.36%
December 2, 2021 Thursday 1 BTS = 15.74 ZWL +0.30 ZWL +1.89%
December 3, 2021 Friday 1 BTS = 17.58 ZWL +1.83 ZWL +10.43%
December 4, 2021 Saturday 1 BTS = 12.96 ZWL -4.61 ZWL -35.58%
December 5, 2021 Sunday 1 BTS = 11.71 ZWL -1.25 ZWL -10.71%
December 6, 2021 (today) Monday 1 BTS = 11.53 ZWL -0.18 ZWL -1.58%
The cost of 1 BitShares (BTS) in Zimbabwean Dollars for a week (7 days) decreased by -3.97 ZWL (three dollars ninety-seven cents).
November 6, 2021 Saturday 1 BTS = 16.21 ZWL +0.46 ZWL +2.83%
December 6, 2021 (today) Monday 1 BTS = 11.53 ZWL -4.69 ZWL -40.65%
The cost of 1 BitShares (BTS) in Zimbabwean Dollars for a month (30 days) decreased by -4.69 ZWL (four dollars sixty-nine cents).
December 6, 2020 Sunday 1 BTS = 7.35 ZWL -0.11 ZWL -1.53%
December 6, 2021 (today) Monday 1 BTS = 11.53 ZWL +4.18 ZWL +36.23%
The cost of 1 BitShares (BTS) in Zimbabwean Dollars for a year (365 days) increased by +4.18 ZWL (four dollars eighteen cents).